Nahoana Us - Mandarin Morning Sekoly sinoa
Ny mazava sy ny fiteny fahiny ny Shina: Mandarin. Mihaino ny resaka Shinoa dia toy ny hoe ny teny mihaino ianao, niara-nahatonga an'ilay bibidia maromaro fihetsik'ireo sary mihetsika fohy izay hiseho eo imasonao. Tsy mahagaga, sy ny Han Zi (Shinoa Script), ny endri-tsoratra izay rehetra homarinana avy amin'ny sary, milaza tantara araka ny! Ireo endri-tsoratra Sinoa endrika amin'ny ny teny raha miaraka amin'izay koa ahafahana manovaova goavana, manome anareo ny fahafahana maneho tsara ny tenanao sy ny fomba mahery vaika. Ary tsy mahagaga isika, manamafy ny maha zava-dehibe ny mihaino ampy fahaizana, toy ny fahaiza-manao ireo aural maintsy noho ny mianatra ny hifandray amin'ny tena fomba mahazatra Shinoa.
Ny tao-trano fianarana natao 1-2-3 Cycle Manaiky tanteraka ireo sy ny hafa koa ny fototry ny fiteny sinoa. Potipotika ny fiteny isika mba hahatonga anao hahita sy hahatakatra ny fototry ny azy, tamin'izany andro izany, dia mampiasa azy io manomboka fotsiny. Ary tsy mba tahaka nianaranao ny fitenin-drazany, izay mampiasa sy mahafantatra akaiky?
EAST NIFANENA WEST
"Mpampianatra ô, inona no Iaveh ogic ny Mandarin ? Ireo fitsipika rehetra homenao ahy, dia manao kofehy ireny ny lohako! Raha toa ianao ihany no afaka manazava amiko ny lojika, mahay tsara aho, dia ho eo anatrehanao fantatrao! "
Eny, Toa fomba fampianarana ampiasaina, tsy tetezana fotsiny ny elanelana misy eo Tandrefana (tsy Shinoa) Shinoa fomba fisainany sy ny fomba fisainana, dia ny ady sy ny Mandarin fiteny tandrefana. Tsy ny fanatitra hahatakatra izay tiana hambara, fitsipika no natolotra, ary fitsipika bebe kokoa.
Mba hahatonga ny fiainana Zavatra mora ho an'ny mpianatra ny ekipa niakatra fomba fiasa vaovao antsoina hoe Slow Motion Technique . Slow Motion teknika tokoa dia mampiseho anao ny lojikan'ny Mandarin, eny, mihoatra noho ny zava-dehibe, dia mampianatra anao Mandarin monja hanjakan'ny lehilahy iray raha tokony ho am-polony, ary izay mpianatra tsy toy izany?
Misy zavatra naniry fantatrao aloha, tsara Slow Motion Technique ho ahy dia ny iray tamin'izy ireo. Manantena aho ho hitanao izany ho manampy tahaka ny nataoko tamin'izany fotoana izany!
Izany no asa nanirahana azy hampiely ny tsara tarehy teny Sinoa rehefa nanafaka ny mpianatra ny fampianarana tsara indrindra azo atao, na inona na inona ny fanirian-daza fatratra, fiaviana na ny taona, ary na aiza na aiza izy ireo.
Mba ho afaka ny hanao izany izahay nangataka ny tsara indrindra lasa mpampianatra sy ny manam-paharoa fampianarana foto-kevitra, mandefitra ny valiny mihoatra fanantenana.
Miorina eo amin'ny fahitana ny tena endri-javatra dia toy izao manaraka izao.
Anarana iombonana amin'ny fomba Morning
2 ao amin'ny 1 sy 2 PLUS 1 ny Fandaharam-pianarana
Ny Fandaharam-pianarana mahatonga anao hanatratra ny tanjona Mandarin fianarana, raha mbola miaraka amin'izay koa, manomana anareo handeha Shinoa fanadinana
Taranja fanampiny ilaina mba hiomanana ho an'ny fanadinana
Clever fianarana, mampiasa ny Slow Motion Technique
Ny Slow Motion Technique dia maneho ny tena fototry ny Mandarin, izay boosts ny fianarana haingana manan-
Ny fototry ny teny Mandariny dia tsy nambara
EASY tsianjery, mampiasa ny Structure Map
Isika potipotika ny teny Shinoa ho maro manan-danja trano sakana. Izany no mahatonga azy mora azo sy mora noho izany ny mitadidy izany
Ny fanaovana tsianjery fotsiny amin'ny alalan'ny famerimberenana
FUN fampiasana dia mampianina ny fahalalana ho fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fomba maro ny fampiharana
Lalao, mozika, tononkalo, sarimihetsika, EA asa. ho manan-danja ny ampahany amin'ny fomba, tsy mandritra ny antokony fa koa eny toeram-pianarana ary rehefa diplaoma
Fomba iray manao: ihany no mampiasa ny boky
Fomba fampianarana manara-penitra
Zavatra Morning fomba fampianarana ampiasain'ny mpampianatra rehetra mba hahazoana fampianarana kalitao
Fomba fampianarana miankina amin'ny mpampianatra: mpampianatra samy hafa mampiasa fomba hafa
Fandaharam-pampianarana mitohy fanatsarana
Miorina amin'ny mpianatra 's feedback sy ny mpampianatra traikefa mitombo mandrakariva isika hanatsara ny antokony mampiasa ny drafitry-DO-check-Asa tsingerin'ny
Tsy misy fandaharam-pampianarana mpomba ny mpanao fanatsarana
Raha manana fanontaniana ianao momba ny sekoly sy ny fandaharana, tsindrio ny bokotra eto ambany ary mifandray antsika!